Ogeysiiska isbeddelka qaabdhismeedka hay'adeed ee shirkadda
Waqtiga boostada: 09-20-2020
Macaamiisha Qaaliga ah: Ganacsigeennu wuu sii ballaaranayaa horumarka joogtada ah ee sannadahan awgood. Laga bilaabo Sebtember 2020, waxaan dhiseynaa shirkad cusub oo lagu magacaabo Jiangsu TISCO Industrial Co., Ltd. Jiangsu Join Industrial Co., Ltd hadda waa laan ka mid ah Jiangsu TISCO Industrial Co., Ltd. Fadlan ogow taas. Akhri wax dheeraad ah »
KALA DUWAN 304 IYO 316 birta birta ah
Markaad xulaneyso bir birta ah oo ay tahay inuu adkeysto bey'ada wax halaagta, birta biraha austenitic caadi ahaan waa la isticmaalaa. Haysashada aalado farsamo oo aad u fiican, xaddiga sare ee nikkel iyo chromium ee ku jira birta biraha austenitic sidoo kale waxay bixisaa caabbinta daxalka oo aad u fiican. Intaa waxaa sii dheer, ...Akhri wax dheeraad ah »